हतियार सहित एक भारतीय र बैकिङ्ग कसुरको आरोपमा बैंककै कर्मचारी पक्राऊ
कोरोनाबाट देशभर ६ हजार २ सय ९५ जना संक्रमण मुक्त
महामारीको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा बाल मनोवैज्ञानिक शिक्षामा ध्यान दिन आग्रह
धनुषामा पोखरीमा डुबेर पाँच बालिकाको मृत्यु, दुई बेपत्ता
पर्सामा कोरोना संक्रमण घट्दै गएपछि निजी हस्पिटलमा ओपिडि सेवा सुरु हुदैँ
कोरोना महामारीले धरासायी बन्दै सौन्दैर्य व्यवसाय (कोरोना विशेष खबर)
निषेधाज्ञामा मानकारीहरुको सहयोगले विपन्नहरुलाई राहत (कोरोना विशेष खबर)
२४ घण्टामा ५१५३ जना संक्रमित, १०८ जनाको मृत्यु
पहिलो फेजको कोरोना महामारीले विश्वकै अर्थतन्त्रमा ठूलै प्रभाव पारेको थियो ।
बैशाख २२, २०७८ सन्ध्या पौडेल
पहिलो फेजको कोरोना महामारीले विश्वकै अर्थतन्त्रमा ठूलै प्रभाव पारेको थियो । यसले हरेक क्षेत्रलाई धरासायी बनाएको छ पनि । कोरोनाका कारण कति व्यवसायीहरुले व्यवसाय नै परिवर्तन गरे । अन्य क्षेत्र जस्तै कोरोनाको प्रभाव सहकारीमा पनि नपर्ने कुरै भएन । यो क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित भएकै छ । अझ सहकारी क्षेत्रमा कोरोनाको कारण भित्री असर चाही के परेको छ ? भनी विगत आठ वर्षदेखि सहकारी क्षेत्रमा रहेका र हाल ड्राईपोर्ट स्थित श्री विन्दवासीनीमाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. का प्रबन्धक मनु कुमार पटेलसंग मध्य नेपाल सन्देश पत्रिकाले गरेको बिशेष कुराकानी :
१) सहकारीहरुको हालको अवस्था कस्तो छ ?
कोरोनाको सुरुवाती दिन एकदमै नाजुक थियो । बजारको स्थिति जस्तो हुन्छ सहकारीको अवस्था पनि लगभग उस्तै हुने हो । किनभने बजार चल्या,े व्यापार राम्रो भयो भने मात्रै सहकारीको अवस्था राम्रो हुन्छ । लकडाउनले गर्दा धरासायी बन्न पुगेको सहकारी संस्थाहरु व्यापार व्यवसाय चलायमान भएसंगै बिस्तारै आफ्नो पुरानै लयमा फर्कदो अवस्थामा छ । तर अहिलेको समयमा पूर्ण भइसकेका खातावालाहरुले आफ्नो बचत लगिरहेका छन् । नयाँ बचत गर्ने संख्या भने घटिरहेको छ । त्यस्तै ऋण लगेकाहरुको पनि भाका नागिसकेको अवस्था छ । आशा छ बिस्तारै पहिला कै अवस्थामा फर्किन्छ कि । यो २–३ महिनामा बजारको स्थितिमा सुधार भएकोले पनि सहकारीहरुको अवस्था लगभग राम्रो हुँदै थियो । कुनै कुनै सहकारीहरुलाई गाह्रो छ । बाँकी केही सुधारको अवस्थामा छन् । तर फेरि कोरोनाको हल्ला थपिएपछि भने यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
२) कोभिडका समयमा के कस्तो चुनौतिहरु आए ? त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नु भयो ?
लकडाउनको घोषणा हुँदा सबै जना आतंकित भएको अवस्था थियो । किन कि यो सबैका लागि नयाँ थियो । सुरुवाती दिनमा हामीले पनि सहकारी बन्द ग¥यौं । तर विस्तारै सुरक्षा सावधानी अपनाएर बैंकहरु खुल्न थालेपछि हामीले पनि खोल्न थाल्यांै । त्यो समयको चुनौति भनेको बचत कर्मीहरुलाई रकम दिनुपर्ने हुन्थ्यो । बचत राखेका बचत कर्ताहरले धमाधम रकम निकाल्न थाले । तर बचत कम र ऋण फिर्ता भएन । त्यसमाथि बैंकले सहकारीहरुका लागि एक चेक बाराबर २५ लाखभन्दा बढी रकम झिक्न दिएन । जसले गर्दा हामीले हाम्रा सेवाग्रहीहरुको माग अनुसारको रकम दिन सकेनौं । लगभग केही दिन त्यही अवस्था रह्यो । तर पछि बिस्तारै बिस्तारै वातावरण सहज हुँदै गयो । विस्तारै रकम झिक्ने र बचत गर्ने अनुपात समान हुन थाल्यो । ४ महिना जति त गाह्रो भयो । तर त्यसपछि भने सहज बन्यो । सुरक्षाको पनि पूर्ण व्यवस्था गरी बिस्तारै हामीले पुरानै शैलीमा कार्यालय संचालन गर्न थाल्यौ । हरेक परिस्थिमा आफू तयार रहनु पर्छ भन्ने पाठ कोरोना महामारी र लकडाउनले सिकाएको छ ।
३) सहकारीले कुनकुन क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेको छ ? व्याजदर ठिक छ ?
धेरै त हामीले व्यापार र कृषिमा नै लगानी गरेका छौ । किनभने हाम्रो प्रायः बचत कर्ताहरु व्यपार र कृषिसंगै आवद्ध हुनुहुन्छ । हामीले हायर पर्चेजमा पनि लगानी गरेका थियांै । तर कोरोना पछि विदेशीनेको संख्यामा कर्मी आएपछि भने त्यो सेवा संचालनमा छैन । हामीले दिने भनेको व्यवसाय कर्जा कृषि कर्जा, सवारी साधन खरिद कर्जा र नयाँमा ग्याजेट कर्जा मात्रै हो । हामीले कोरोना महामारीले प्रभाव पारेको हुँदा हाम्रा ऋणी सदस्यहरुका लागि तीन प्रतिशत व्याज छुट समेत गरेको थियो । तर अहिलेको अवस्थामा सरकारले नै १४.७५ प्रतिशत तोकिदिएको छ । पहिला हामीले १८ प्रतिशत ब्याजदर लिइरहेका थियौ ।
४) अहिले सहकारीहरु विघठनका कुराहरु पनि सुनिन्छ यसको कारण के देख्नु हुन्छ ?
लिक्यूडिटी भन्ने हुन्छ वित्तिय संस्थामा । लिक्यूडिटी भन्ने कुरालाई जसले राम्रोसंग गर्न सक्दैन । कम्तीमा पनि २० प्रतिशत रकम राखेर हिड्नु पर्छ । ५ प्रतिशत तलमाथि हुँदा खासै फरक पार्दैन । यदि १० लाख रुपैया सहकारीको छ भने त्यसको २० प्रतिशत २ लाख रुपैया बैंकमा राख्नु पर्छ । बैक र कार्यालयमा गरेर तुरुन्तै निकाल्न सकिने गरी । तर यहाँका प्राय सहकारीहरुले ५ प्रतिशत वा त्यो पनि नराखी चलाउँदा रहेछन् । त्यही समयमा एकैपटक लकडाउन भयो । रकम धेरै झिकिए । तर बजारमा लगाएको लगानी उठेन । त्यसले गर्दा सहकारी बंन्द गर्नु पर्ने अवस्था आयो । यस्तै कारणहरुले नै हो सहकारी भाग्ने वा विगठन हुने ।
५) सरकारले के गर्नु पर्ने देख्नु हुन्छ ?
सरकारले आफ्नो मतहातमा लिएर सहकारीहरुको समस्यालाई बुझिदिनु प¥यो । बैंकहरु मर्ज गराए जस्तै सहकारीको एउटा मापदण्ड बनाएर सहकारीहरुको अवस्था बुझी उनीहरुलाई मर्च गर्नु पर्छ । यसो हुँदा सहकारीहरु प्रति विश्वास पनि बढ्छ र सदस्यहरु ठगिने समस्या पनि रहदैन ।
बुधवार, बैशाख २२, २०७८, ०२:०५:००
फेरि बढ्यो इन्धनको भाउ, पेट्रोलको मूल्य १२५ रुपैयाँ पुग्यो
संविधानको वाध्यकारी अवस्थाले मात्र महिलालाई अवसर
मारमा छौ अझै करको भार नथपियोस् सरकार
सुधार हुँदै गरेको अर्थतन्त्र पुनः प्रभावित :राष्ट्र बैंक
तत्काल आइपर्ने समस्या निरुपण गर्दै अगाडी बढ्छु : उपाध्यक्ष शर्मा समाचार लेख्दा केही सिक्ने अवसर पनि हुने रहेछ
बैशाख ६, २०७८ सन्ध्या पौडेल
माघ २५, २०७७ सन्ध्या पौडेल
हतियार सहित एक भारतीय र बैकिङ्ग कसुरको आरोपमा बैंककै कर्मचारी पक्राऊ जेठ २९, २०७८
फेरि बढ्यो इन्धनको भाउ, पेट्रोलको मूल्य १२५ रुपैयाँ पुग्यो जेठ २३, २०७८
संविधानको वाध्यकारी अवस्थाले मात्र महिलालाई अवसर जेठ २०, २०७८
मारमा छौ अझै करको भार नथपियोस् सरकार जेठ १२, २०७८
कोरोना महामारीमा एम्बुलेन्स चालक, कोही निडर कोही त्रसित (कोरोना विशेष खबर)
थवई समुदायलाई रोग भन्दा बढी भोकको चिन्ता
पर्सामा स्वास्थ्यकर्मीहरुको चरित्रहत्या गर्ने एक युवक पक्राउ